निर्वाचनमा सही दलका सही उम्मेदवार छान्नुपर्छ
विद्युतीय बत्तीको झिलिमिलीले अर्बौं रकम विदेशिने
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई शुभकामना !
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक निष्त्रि्कय पार्ने को?
भ्रष्टाचार र विकृति पूँजीवादी व्यवस्थाको छाया
सरकारमा बसेर समाजवादी क्रान्ति?
ठूलो दल बन्दैमा देश समृद्ध र आत्मनिर्भर बन्दैन
अब बन्ने सरकारले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउँछ?
छलछामको राजनीति कम्युनिष्ट पार्टीलाई सुहाउँदैन
सत्ता स्वार्थको लागि एकता
सभामुखको लोकतन्त्रविरोधी हमला
प्रचण्डको साम्यवादः ध्वाँस र पाखण्ड
के ट्रम्प विश्व शान्तिको दुश्मन बन्दैछन्?
अध्ययन र रचनात्मक गतिविधिमा ध्यान देऔं
अमेरिका विश्वकै लागि खतराको मुलुक
संविधान व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ
भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारमा गएका सबै दल दोषी
इतिहासले न्याय खोज्दैछ
निर्वाचनमा मुख्य शत्रुलार्ई जिताउन नहुने
प्रम देउवामा राजनैतिक नैतिकता खोइ?
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हप्ता दिनभित्र हुँदैछ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ २६ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। मन्त्रिमण्डलको पछिल्लो पटक राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पक्षघधन आयोगले आपत्ति जनायो। आचारसंहिताविपरीत भएको हुँदा आयोगले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा असहमति जनाएको हो। आयोगको असहमतिले सरकारलाई फरक नपारे पनि नकच्चरो सरकार बन्यो।
देउवा यसअघि प्रम हुँदा पनि यसरी नै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनेको थियो। देउवाले आवश्यक ठानेर ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएका होइनन्। अप्ठेरो परेकोले मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको बताउनु देउवाको बहाना हो। मन्त्रिमण्डल ठूलो बनेर सुशासन हुने होइन। निर्वाचन गराउन कसैलाई खुसी पार्नु पनि छैन। यति बेला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समय पनि होइन। यो प्रजातान्त्रिक दललाई सुहाउँदैन। राजनैतिक नैतिकताको कुनै मतलब नराखी देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर प्रजातान्त्रिक मुलुकको खिल्ली उडाउने काम गरे। जनताप्रति जवाफदेही नबनेको, लोभलाजको ख्याल नगर्ने नेता देउवाले संसदीय व्यवस्थाकै बद्नाम गरे। नपाउनेले केरा पायो बोक्रासमेत खायो भनेको यही हो।
नेका नेता देउवा यति गिरेर किन अघि सरे? मन्त्री थप्ने प्रम देउवा र मन्त्री बन्न चाहने राप्रपा (प्र) का नेताहरू यसका बढी दोषी छन्। मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाच घोषणा भइसकेको छ। उक्त निर्वाचनपछि फेरि नयाँ सरकार गठन हुनेछ। यति ठूलो मन्त्रिमण्डल सरकारले गठन गर्नुहुने थिएन। यो देउवा सरकारको अर्को गल्ती हो। यो देशको राजस्व सिध्याउने या बाँडीचुँडी खाने दाउ हो। यसअघि देउवाले अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचनमा उठ्ने अवसर दिन आफ्ना पूर्वसांसद र मन्त्रीहरूलाई शुद्ध पार्ने काम गर्न लागेका थिए, तर त्यो प्रयास असफल भयो।
अहिले सरकार फेर्ने स्थिति छैन, सरकार बदल्न कुनै दल लागेको छैन। निर्वाचन नसिधुञ्जेल यही सरकारलाई निरन्तरता दिने सत्तासीन दलहरूको राय हो। निर्र्वाचन अघि नयाँ सरकार गठन गर्दाको अर्थ पनि हुँदैन। यस्तो स्थितिमा देउवाले राप्रपाका मन्त्रीहरू थपेर देशकै ठूलो सरकार गठन गरेर अनैतिक र औचित्यहीन कार्य गरे। यसले देउवा सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार नबनेको देखाउँछ। कुनै दलको दबाबमा अनावश्यक मन्त्री थप्ने देउवाले यसरी नै अर्को दबाबमा परेर संविधान संशोधन पारित गर्ने असफल प्रयास गरे। आचरण, नैतिकताको ख्याल नगर्ने नेताहरू मनपरी निर्णय गर्छन्। यसमा प्रम देउवा फसे। यो देउवाको कायरता हो, यो देउवा सरकारको कलङ्क हो।